अचानक घरको खसेपछि वंशनै नरहने गरि परिवारै नै सकियो ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > अचानक घरको खसेपछि वंशनै नरहने गरि परिवारै नै सकियो !
admin June 26, 2020 June 26, 2020 समाचार, समाज	0
अ’चानक घरको छत ख’स्यो । घरमा रहेका दुई बच्चा र पत्नीको घ’टना स्थलमै मृ’त्यु भयो भने पतिको अस्पताल लैजादै गर्दा बाटोमै ज्या’न गयो।भारतीय मिडियाका अनुसार उक्त घर एकै कोठाको थियो। मृ’तक मोहन कहारले पछिल्लो चार महिनादेखि उक्त घर भाडामा लिएका थिए। मोहन साबुआ भन्ने स्थानका थिए। तर उनी चार महिलाअघि मात्रै परिवारसहित त्यहाँ बस्न आएका थिए। उक्त घर ४०-४५ वर्ष पुरानो भएको बताइएको छ।
मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा नेकपाका नेता गौतमको निधन